Masinina, gorodona, gorodona famolahana - Marcospa
Suzhou Marcospa dia natsangana tamin'ny taona 2008. Manokana manokana amin'ny famokarana milina fanaovana gorodona, toy ny grinder, polisera ary mpanangona vovoka. Vokatra avo lenta, lamaody, be mpampiasa amin'ny maritrano isan-karazany, tsy vitan'ny besinimaro amin'ny tsenan'ny varotra eto an-toerana, fa aondrana any Eropa sy Etazonia koa.
Marcospa hinge nandritra ny taona maro dia nifikitra hatrany amin'ny "kalitaon'ny vokatra mba hahatafitana velona, ​​tanjona amin'ny serivisy fitokisana sy serivisy fampandrosoana". Manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy kalitao. Manàna ekipa mpitantana famolavolana matihanina sy feno fanoloran-tena, manomboka amin'ny famolavolana vokatra, fanaovana bobongolo, famolavolana hatramin'ny fivorian'ny vokatra, ho an'ny lafiny tsirairay sy ny fizotrany dia sedraina mafy sy hifehezana…
Mampiasa teknolojia mandeha ho azy feno kokoa ny vokatra mahomby kokoa, mateza kokoa, mandany fotoana ary mety.
Ny fanjifana angovo vokatra dia ambany kokoa, fa koa hitazomana ny kalitaon'ny benchmarking vokatra.
Ny fenitry ny haitao vokatra dia nanjary indostria, indrindra ny indostria teknolojia avo lenta, ny avo indrindra.
Nahazo fiheverana betsaka momba ny indostria amin'ireo mari-pahaizana sy fanekena lehibe.
TS3000 indostrialy fitrandrahana vovoka tokana ...
C5 andian-dahatsoratra telo dingana mijanona karazana industria ...
FB andiany dingana telo fipoahana porofo mivaingana ...
Fampiharana fampiharana ny milina fandefasana haingam-pandeha ① Diniho ny zava-misy marina amin'ny tany ary diniho ny filàna mifehy ny olana amin'ny fasika. Voalohany, asio fitaovana mpitsabo mpanasitrana amin'ny tany hanatsarana ny hamafin'ny tany. ② Mampiasà gripa mavesatra 12 sy vy ...
Ny fahombiazan'ny milina fitotoana gorodona dia misy: ny sakan'ny fitotoana, ny fiasan'ny lohan'ny loha, ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana, ny fanerena ny lohan'ny lohany, ny fifehezana ny volan'ny rano, sns. Ny fenitry ny fananganana dia mizara ho: fisaka, fahazavana ary famirapiratana. 1. Ny gr ...
Ataovy azo antoka sy hatsaraina ny firafitry ny gorodon'ny loko vita amin'ny gorodona: ny tampon'ny fotony vita amin'ny beton dia afaka mamela ny volon-doko vita amin'ny gorodona hiditra bebe kokoa amin'ny vatan'ny beton, izay manana andraikitra lehibe amin'ny ain'ny serivisy amin'ny fonosana loko manontolo. Indrindra rehefa misy tasy solika sy rano amin'ny ...